Inkonzo yokunyathela iintsimbi - iAnebon Metal Products Co, Ltd.
Inkonzo yokuKhusela ngokukhawuleza
Inkonzo ye-Metal Stamping
Icandelo lokuguqula i-CNC
Isitampu sokunyathela esenziwe ngesinyithi se-Anebon kubandakanya ukubetha ngenqindi, ukugoba, ukuzolula, ukwenza i-embossing kunye neminye imisebenzi. Inkqubo nganye yenziwa kusetyenziswa izixhobo ezenzelwe i-CAD / CAM ezinokubonelela ngokuchaneka okufunekayo kweendawo ezinzima. Ukunyathela i-sheet yesinyithi yindlela ekhawulezayo nesebenzayo yokuvelisa iindawo ezomeleleyo, ezikumgangatho ophezulu zehardware, i-aerospace, ezonyango, i-elektroniki, imizi-mveliso, ukukhanya kunye namanye amashishini. Siza kusebenzisa izixhobo zethu eziphambili kunye neqela elinamava ukwenza iimveliso ocinga ngazo, kwaye siyakholelwa ukuba sinokuhlangabezana neemfuno zakho zombini ngokwexabiso kunye nomgangatho.
Singanikezela ngezi ndlela zilandelayo zokuvelisa:
Izinto ezitsaliwe nzulu
Ukubhola, uthinte kwaye usebenze kwakhona
Indawo kunye nokuqikelela ukuwelda
I-welding ye-CO2 -sandla kunye nerobhothi
Inkqubo yokuNyathela iintsimbi
Nangona inokuguqulwa ukuze yenze iindawo ezithile, ukunyathela kwethu isinyithi kuhlala kulandela amanyathelo amahlanu:
Uphengululo loyilo:Iinjineli zethu ziya kuqwalasela uyilo lwenxalenye ngokweenkcukacha ukuqinisekisa ukuba kufanelekile ukunyathela isitampu. Oku kubandakanya uhlalutyo olunzulu lobungakanani benxalenye, izinto zokwakha, iiRatos ratios kunye nokunyamezelana okufunekayo.
Ukhetho lweendaba: Iinjineli zethu ziya kugqiba ngobona bungakanani bomatshini obufanelekileyo kunye nobubanzi kubungakanani benxalenye kunye nezinto eziphathekayo.
IPrototype eyiyo eyi-3D:Sebenzisa isoftware ebonakalayo ukwenza iiprototypes zamalungu. Phambi kokuba inkqubo yokuvelisa iqale, iprototype iqhutywa linani elikhulu lokulinganisa kokusebenza ukufumana naziphi na iingxaki zoyilo.
Ukuseta Izixhobo: Iinjineli zethu ezinezakhono zijonga ubungakanani kunye neemfuno zezinto kunye nokuseta izixhobo.
Inkqubo:Beka isinyithi okanye isinyithi singenanto ekubumbeni kwaye uyilungise. Emva koko yenza umatshini wokushicilela kwaye uqalise ukusebenza ngamandla ashukumayo. Phinda inkqubo kude kube icandelo lifikelela kubungakanani obufunwayo kunye nemilo.
Uyilo kunye nokwenziwa kokuqhubela phambili kunye nezixhobo ezichanekileyo ziyinxalenye yesithembiso sokuzisa isisombululo esigqibeleleyo sokuvelisa kwimveliso yentsimbi ecinezelweyo.
Namhlanje, sisebenzisa ubuchwephesha bethu ngaphakathi kwendlu ukubonelela ngeenkonzo ezichanekileyo zokulungisa iindleko eziphezulu.
Singahlehlisa uyilo lwemveliso okanye umzobo wobunjineli weCAD ukuvelisa isixhobo somatshini esinokuvelisa imveliso yakho. Izixhobo zomngundo zihlala ixesha elide kwaye zithembekile, zinomjikelo wobomi obude, ke iindleko zinokuthathwa njengotyalo mali.
Isixhobo sokubumba siya kuba sesakho, kodwa sinokugcina, sihlaziye kwaye silungise xa kufuneka njalo.
Ukushicilela i-Sheet Metal
Njengesixhobo esipheleleyo kunye nevenkile yokufa, sinamakhono kuzo zonke iindawo zokubumba kubandakanya i-fiber laser, ukubetha kwe-CNC, ukugoba i-CNC, ukwenza i-CNC, i-welding, i-CNC machining, ukufakwa kwehardware kunye nendibano.
Samkela izinto ezingaxutywanga kwiimakhishithi, iipleyiti, imivalo okanye iityhubhu kwaye sinamava ekusebenzeni ngezinto ezahlukeneyo ezinjengealuminiyam, ubhedu, intsimbi engenasici kunye neentsimbi zekhabhoni. Ezinye iinkonzo zibandakanya ukufakwa kwehardware, i-welding, ukugaya, ukuvelisa, ukujika kunye nokudibana. Njengoko umthamo wakho usonyuka sikwanalo nolwazelelo lwezixhobo ezomeleleyo zamalungu akho ukuba asebenze kwisebe lethu lokunyathela isinyithi. Ukhetho lokuhlola luvela kwinqanaba elilula lokujonga yonke indlela nge-FAIR kunye ne-PPAP.
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu, nceda ushiye imeyile yakho kuthi kwaye siya kuba kwebala zingadlulanga iiyure eziyi-24.
Iimveliso zentsimbi yeAnebon Co., LTD